पूर्वरानी शाहको जन्मोत्सवमा पारस-हिमानीको भेट ! – Nepali Janata Khabar
पूर्वरानी शाहको जन्मोत्सवमा पारस-हिमानीको भेट !
झापा – पूर्वयुवराज पारस शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहबीच शुक्रबार भेट भएको छ। झापाको होटल मेची क्राउनमा पूर्वयुवराज दम्पत्तीबीच भेट भएको हो।
पूर्वरानी कोमल शाहको ७१ औं जन्मोत्सवको अवसरमा पारस र हिमानीबीच भेट भएको हो । जन्मोत्सवका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारले झापाको धुलाबारीस्थित मेची क्राउन होटेल एक साताका लागि बुक गरेको जनाइएको छ ।
यसअघि पारसबाहेक राजपरिवारका सदस्य जन्मोत्सवमा सहभागी हुने बताइए पनि पोखरामा रमाउँदै गरेका उनी एकाएक मेची क्राउनमा पुगेका थिए ।
पारस उक्त कार्यक्रममा पुगेपछि हिमानीसँग केही कुराकानी समेत भएको जनाइएको छ । हिमानी र पारससहितको सपरिवारको तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जामा भाइरल बनेको छ ।
गत बुधबारदेखि नै पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरु उक्त होटेलमै रहेको जनाइएको छ । पूर्व राजा शाह दम्पती भने केही महिना अघिदेखि नै झापामा रहँदै आएका थिए ।
शुक्रबारको जन्मोत्सव शुभकामना दिन केही राजावादी तथा राजसंस्था पक्षधरका स्थानीय नेताहरू पनि पुगेको जनाइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी भिखमपुर द्वारा अवैध कुखुरा बरामद
नेता शेरबहादुर तामाङ दम्पत्ति ओली समुहमा प्रवेश गर्ने यस्तो निर्णय